Al-shabaab oo si cad isaga fogeeysay iney dileen Ikraan Tahliil Faarax – Radio Damal
Dagaalamayaasha Al-shabaab ayaa si cad u shaaciyay ineysan wax lug ah ku laheyn dilka Ikraan Tahliil Faarax oo ay Xalay hay’adda Nabadsugida Qaranka Soomaaliyeed sheegtay iney Al-shabaab dileen Ikraan Tahliil oo mudo laba bilood ah lagu weysanaa nolol iyo geeri horayna uga tirsaneyd hay’adda NISA.
“Anagu waan beegsanaa madaxda iyo saraakiisha hay’adda sirdoonka ashahaadda ladirirka ah oo bartilmaameed ayey inoo yihiin waana sheegannaa dilkooda oo cid aan uga heebeysano ma jirto laakiin gabadhaas afduubkeeda iyo dilkeeda wax shaqo ah oo aan ku leenahay ma jirto” ayaa lagu yiri qoraalka Al-shabaab ay ku shaaciyeen barahooda Internet-ka.
Al-shabaab ayaa sidoo kale sheegtay in hay’adda NISA ay tahay hay’ad u shaqeysa gaalada oo markii horeba lagu dhibaateyn jiray shacabka Soomaaliyeed, haatana ay iyagii dhexdooda is beegsanayaan.
“Kama dammbeynmo waxbana kama ogin dilka gabadha lagu magacaabo Ikraan Tahliil ee u shaqeyneysa hay’adda NISA, la yaab ayeyna nagu noqotay in sirdoonka dowlada ridada nagu masabido dilka gabadhaas, sida dadka Soomaaliyeed ula fajaceen warkaas ayaan anaguna la fajacnay” ayaa lagu yiri qoraalka Shabaab ku shaaciyeen barahooda Internet-ka.
Hadalkan kasoo yeeray Shabaab ayaa imaanaya xili hay’adda Nabadsuguda Qaranka Soomaaliyeed Xalay ay shaacisay in Ikraan Tahliil ay gacanta u gashay Al-shabaab islamarkaana ay dileen.